Ụmụ nwanyị na - eme ihe na - eji oji - nwa, pink, uhie, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, akpụkpọ anụ, denim, quilted, windet, jaket, coat, sweatshot, raincoat, elongated, insulated
Nwanyi bu bombu - ihe eji eyi na otu esi emeputa ihe oyiyi ndi ozo?
Ngwunye bombu a na-emekarị bụ onye a ma ama n'ihi na ọ dị mfe ma na-agụ ya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eto eto na-ejikọta ihe a na uwe mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe, n'eziokwu, ọ dịghị enwe oge ọ bụla ma a ga-eche ya maka oge ọ bụla n'afọ. Tụkwasị na nke a, ndị nhazi oge a na-etolite ọtụtụ ụdị ọhụrụ kwa afọ.
Nwanyi Bomber 2018
Ngwunye bombu mara mma ma mara mma n'oge ọ bụla anaghị anọgide na-ele ndị na-emepụta ejiji anya. Ndị na-emepụta ákwà maka ụmụ nwanyị mara mma na-emepụta oge okpomọkụ, oge oyi na nkeji oge nke ihe dị iche iche dịka akpụkpọ anụ, denim, plaschevka, chintz na satin. N'afọ 2018, a na-emepụta akpụkpọ anụ na akpụkpọ anụ, gụnyere, ma na-ese ya na agba ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, Saint Laurent, Alexander McQueen, Moschino, Versace na ụdị ndị ọzọ oge a na-elebara ụdị ndị ahụ anya. Na nchịkọta nke ụlọ ndị a ma ama nke 2018, e nwere ụdị dị iche iche na-egbuke egbuke ma dị iche iche dị iche iche dị iche iche - plashevki na satin, denim na chintz na ndị ọzọ.
A na-eji bọmbụ bọọlụ, ejiji 2018, chọọ ya mma nke ukwuu, ma nke ka nkea na-ese onyinyo. Ndị inyom ndị a na ndị na-enwe mmekọahụ na-ahapụbeghị ejiji fashionable ruo ọtụtụ afọ, oge a na-abịanụ abụghịkwa otu. N'afọ a, ndị na-emepụta ihe na-emepụta nhọrọ dịgasị iche iche, nke a na-emekarị na shafuru pastel na ọtụtụ nchara nke pink.
Ụmụ nwanyị bombs
Nneji nwanyi na-egbukepụ egbukepụ na-adọrọ adọrọ na-enwe ụdị ọdịiche dịgasị iche iche, n'adịghị ka ụdị nwoke a. Nye ndị inyom mara mma, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe mepụtara ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị na nke mbụ - na-eji eriri ma ọ bụ ajị anụ, ma ọ bụ ihe nkedo ma ọ bụ ihe ntanetị, ejiji ma ọ bụ tinye aka, nbipụta na eserese, obere akpa, akwa jet na ọtụtụ ihe.
Ngwunye bombu nke nwanyi na-ewu ewu na oge oyi, dika o nwere ike ichebe onye nwe ya site na ikuku na ikuku. Tụkwasị na nke a, ihe atụ a na-ekpuchi akpa, nke nwere ike dị ezigbo mkpa maka ndị inyom nwere ezughị okè. Mkpanaka igwe na-agbatị ogologo oge nke ụmụ nwanyị nwere ike ịkpachi anya ije, n'ihi ya, ọ gaghị adị mma maka ndị fanyere ọrụ ndị ọzọ.
N'oge na-adịbeghị anya, bọmbụ akpụkpọ anụ ụmụ nwanyị aghọwo ihe a na-ewu ewu nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na - agbapụta ihe mkpuchi jaket sitere na Olympus mara mma. N'adịghị ka ihe nlereanya ahụ na-eme ka bọtịnụ dị na diagonally, bọmbụ-akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke ụmụ nwanyị na-ele anya na ọ dị mfe ma dị mfe, ma ọ dịghị ụzọ ọ bụla na-adighi mmasị ma na-egosipụta.
A na-eji akwa akpụkpọ anụ mee ihe maka oge oyi na nkeji. A na-ejikwa atụrụ ma ọ bụ ụdị ajị anụ ọkụ na-ekpo ọkụ dị iche iche n'oge oyi, nke ha na-eji echekwa okpomọkụ ruo ogologo oge. Igwe bombu na-adọrọ adọrọ mma maka ụmụ agbọghọ ndị ahụ ọbụna na ihu igwe oyi na-eduga ndụ dị ndụ ma ghara ịkwụsị ntụrụndụ ha kacha amasị.
Na-akpa bọmbụ nwanyị
Ngwunye bombu nwere ike inwe ụdị dịgasị iche iche, ka o wee nwee ike eyi n'oge ọ bụla n'afọ. Ya mere, ụdị ndị dị mfe dị ka jaket karịa jaket, a na-echekwa maka mgbede okpomọkụ. Dị ka a na-achị, a na-emepụta ngwaahịa ndị a site na ntiri anụ ahụ, nke na-anaghị akpata nrịanya na-eme ka anụ ahụ na-eku ume.
Mkpanaka jaket nwere ike inwe ọtụtụ agba na mgbanwe dị iche iche, ma ọ na-ele anya mgbe ọ na-adịghị asọmpi. Ọbụna na mpempe akwụkwọ na-egbukepụ egbukepụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ achọpụtara, ọ gaghị abụ nwanyị ma ọ bụ ịhụnanya nke ukwuu, ma na-ejide ọdịdị dị mfe ma dị mma nke na-ejikọtaghị ya na pompous. Ihe nlereanya kachasịsịsịsịsị iche na ihe ndị e ji ekpuchi ihe ndị dị otú ahụ bụ bọmbụ nwa nwanyị. Ọ na-ejikọta ya na ihe dị iche iche, ya mere, ọ nwere ike ịbanye n'ime ma ihe egwu na ihe ọ bụla .
Uwe uwe nwanyi - bombu
Ọtụtụ afọ gara aga, bọmbụ ndị dị ogologo maka ụmụ nwanyị na-atụghị anya na ha gafere n'elu Olympus mara mma, yiri uwe na-ahụ anya. A na-ebute ngwaahịa ndị a karịsịa maka oge ezumike oge nke afọ, ebe ọ bụ na ha na-echebe onye nwe ha site na ifufe, okpomọkụ na ọdịda.
Ot'odi, nwanyi bu bomb-coat na-ejedebe n'elu ikpere, Otú o sina dị, e nwere ụdị ndị na-ekpuchi hips na kodoo. Akụkụ dị n'akụkụ nke ihe ndị ahụ dị na uwe na-abụkarị mkpụmkpụ karịa n'ihu na n'azụ, ọ bụ maka ịkpụ dị otú ahụ anaghị egbochi ijegharị ma kwe ka ị na-eme ihe ndị dị na mbụ.
Nwunye windo nke nwanyi - bombu
N'ọgbọ ndị ntorobịa, bọmbụ ahụ-bọmbụ ahụ dị nnọọ iche. Ihe omuma a bu ihe di iche iche na-adighi adighi nma, ya mere, o nweghi nsogbu obula n'agbanyeghi anya. Ụmụ agbọghọ na-eto eto na-ejikọta ya na jeans na uwe mposi, uwe ejiji , denim shorts na ihe ndị ọzọ na-eyi uwe.
Na-adabere na mmasị onye ọ bụla, onye ọ bụla na-eji ejiji eme nhọrọ na-atụ bọmbụ ọkụ nke ọchịchịrị ma ọ bụ ìhè. Ya mere, ya na ihe ndi ozo, zuru oke ihe ndi ozo nke agba agba gburugburu - oji, isi awọ, nwa ma obu agba aja. Tinye onyinyo nke na-egbukepụ egbukepụ na nkwupụta okwu nwere ike iji bọmbụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ebipụta ya, mgbanwe mgbanwe na-acha odo odo ma ọ bụ lemon-odo ihe nke na-enweghị ike ịhapụ onye ọ bụla enweghị mmasị.
Bomber ndị nwanyi na Hood
Maka mma nke inwe mmekọahụ, ụfọdụ ụdị akwa-bọmbụ na-agbakwụnye site na mkpuchi nke nwere ike iwepụ ma ọ bụ sewn. Site n'enyemaka nke akụkụ a ị nwere ike ichebe onwe gị pụọ na ifufe ma ọ bụ ọdịda, karịsịa na ọnọdụ ebe ihu igwe na-arịwanye elu na mberede. Ka ọ dị ugbu a, a ghaghị ịghọta na ọnụnọ nke mkpuchi na jaket yiri ya na-agbakwunye ụda nke ahụ dị elu, nke nwere ike ịgbanye ụdị nke silhouette.
Ndị na-emepụta ihe ndị a na-eji akwa ákwà, yana ụdị ndị ọzọ nke jetetị ndị a, na ụdị ụdị ejiji dị iche iche. Ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ nwere ike ịhọrọ bọmbụ pink, nke ga-enye onyinyo ha ihe amara na amara, ndị na-agbanye mgbọrọgwụ - ihe dị iche iche na-acha odo odo, na ụmụntakịrị nwanyị - nke na-acha ọcha snow nke na-ejikọta ya na ihe ndị ọzọ dị na uwe, akpụkpọ ụkwụ na ngwa.
Nwunye na-agbaji nwanyi
Otu ụzọ isi eji akwa uwe elu bụ itinye ụkpụrụ ahụ na ihe nkedo. A na-ejikwa usoro a mee ka ndị na-atụ bọmbụ na-achọ mma, bụ ndị na-eme ka ọdịdị nke nwanyi na ọdịdị dị mma. Tụkwasị na nke ahụ, ala a na-ekpo ọkụ na-agbakwụnye ume na ngwaahịa ahụ ma mee ka ọ dịkwuo ọgwụ na mmebi mpụga.
A na-eji nkwụnye aka n'èzí n'elu uwe elu ahụ dịka ihe dị mfe ma dị nkenke ma ọ bụ nke na-egbukepụ egbukepụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, nnukwu ụlọ ma ọ bụ obere obere ụlọ a na-eji ihe ndị dị otú ahụ chọọ mma, ma ọ bụ ihe ndị mbụ ebumnobi na-emetụta nke monograms na ọnyà. Dịka ọmụmaatụ, onye na-akpọ Converse kpọpụtara bọmbụ na-acha uhie uhie nke nwere ọmarịcha nkwekọrịta, na-enye uwe ejiji na ịdị mma.
Ụmụ nwanyị na-egbu mmiri
Oge mgbụsị akwụkwọ na-enye uwe ojii-bomb maka ụmụ agbọghọ, bụ nke a na-eme n'ọtụtụ ọnọdụ elongated. Ọ bụ ezie na ihe atụ a pụtara na ụwa ejiji n'oge na-adịbeghị anya, o meriela obi ọtụtụ nde ụmụ agbọghọ. A na-eji uwe mgbokwasị mee nke akwa ákwà mmiri ozuzo nke nwere ike ichebe ya site na ifufe oyi ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịkwa mmiri, ya mere ọ dị mma maka oge mgbanwe na oge mgbede dị jụụ.
Nwanyị na-agba bọmbụ
Nwanyị mara mma nke nwanyi mara mma, nke ajị anụ ma ọ bụ ụcha ndị ọzọ, dị ka cardigan n'ọdịdị. Ka ọ dị ugbu a, n'adịghị ka nke ikpeazụ ahụ, a na-ejigharị bọmbụ na-ejide bọmbụ a na-ejikọta ọnụ ma na-enwe mgbanaka na mpaghara ala na ebe nchekwa. Maka nkà na ụzụ, a pụrụ ime ihe dị otú ahụ site n'enyemaka nke obere, na site na nnukwu ngwongwo, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-eji ya na-eme ya mma, ihe dị iche iche na ihe ndị ọzọ mbụ.
Kedu ihe ị ga-eyi bombu nwanyi?
Ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụ nwoke na-enwe mmekọahụ na-ekwenyesiri ike na a ga-eyi ihe a naanị ma ọ bụ uwe akwa. N'ezie, nke a abụghị ikpe niile, yana nhọrọ nhọrọ nke ihe ndị ọzọ dị na ya, ị nwere ike ịmepụta ihe oyiyi mara mma mara mma nke ga-adaba, n'etiti ihe ndị ọzọ, maka ụbọchị ịhụnanya.
Nwa oyi oyi bu ihe siri ike iju na ihe ndi ozo, akpụkpọ ụkwụ na ngwa karịa oge okpomọkụ ma ọ bụ mmiri, Otú ọ dị, ị nwere ike ịchọta ụdị ndị kwesịrị ekwesị maka ya. Ya mere, na-agbakwunye ejiji na akwa pantyhose ma ọ bụ na-acha ọkụ ọkụ, ngwaahịa a nwere ike na-eyi n'enweghị ihe mgbochi ya na uwe oyi.
Foto ndị nwanyi nwere bombu
Dị ka a na-achị, iji kee foto, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-eme nke ọma, nke dị mma ma wuchaa, na-atụgharị na njikọ ndị a:
a mara mma-bomb nke corduroy ma ọ bụ velvet ga-anya dị ukwuu na-akpụkpọ ụkwụ-uwe na akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ;
na-acha bọlbụ bọmbụ nwere ike ime ọbụna ihe oyiyi nke mgbede, n'ihi na ọ na-ejikọta ya na uwe mmanya;
ụmụ nwanyị na-agba chaa chaa-ndị na-atụ bọmbụ ga-abụ ezigbo ndị enyi na ụmụ nwoke-nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị. Dabere na uto nke ndị na-emepụta ejiji, a ga-ejikọta setịpụrụ a ma ọ bụ akpụ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ na nfuli na ikiri ụkwụ;
ihe na-egbuke egbuke na-egbukepụ egbukepụ nwere ike ime ka ọkpụkpụ kpoocha mara mma, nke nwere ike belata ma ọ bụ nwee ogologo ọdịnala. N'ebe a, akpụkpọ ụkwụ ikiri ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha bụ snow bụ ihe kasị mma;
Maka oge okpomọkụ, nhọrọ dị oke mma ga-abụ obere mkpịsị denim, T-uwe na-ebipụta na sneakers fashionable . Na nke a, ị na-ele anya jaket dị arọ nke bombu nke otu n'ime agba chaa chaa zuru ụwa ọnụ. Ekwesiri ighota na oke ihe di elu nke ihe di nma n'arodu a gadi iche nke oma na ala nke di ala, nke geche dika ndi nzuzu na ndi nzuzu;
n'ikpeazụ, n'oge oyi, a nwere ike jikọta ihe a na maxi skirts ma ọ bụ midi nke nnukwu ihe na akpụkpọ ụkwụ na nnukwu bootleg. N'okwu a, a na-enye ihe ndị dị na atụrụ na-azụ atụrụ - ha ga-edozi ala dị ala ma nye onye nwe ha nkasi obi kachasị mma na ihu igwe oyi.
Socks maka na-agba ọsọ
Ụdị uwe ojii
Kedu ka akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ?
Uwe Akwa Uwe
Azụ akpụkpọ ụkwụ - ụmụ nwanyị kachasị mma maka osimiri
Agba akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ maka ụmụ nwanyị
Akpịrị na obere aka - kedu na ihe ị ga-eyi?
Ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ
Bozbash - ntụziaka mbụ nke omenala Caucasian
Yucca - mmeputakwa
Brad Pitt ga-ewu ebe mara mma na Croatia na atụmatụ ya
Ọgwụ maka oyi n'oge ime
Egwú egwu na Barcelona
Bee pollen - Ezi ntụziaka na ihe nzuzo nke iji
Gini mere oge ojoo ji merie?
Rickets na kittens
Mgbakwunye nkedo na ụkwụ
Mkpụrụ Osikapa na Ọdịnaya
Nails nke 2014
Egwuregwu ọgwụgwọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Nhazi nke ndidi na ụmụ akwụkwọ ọta akara
Yist mgwakota agwa na-enweghị àkwá